Ka ibugharịa n'ofè mfe nwere. Atọ echiche ndị bara uru n'ihi ọgaranya nwere: ndaba, heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta, na usoro.
-Eme nnyocha ndị ọhụrụ na-nwere na-abụkarị mkpa a kpọmkwem, warara AJỤJỤ: a ọgwụgwọ "ọrụ"? Dị ka ihe atụ, ọ na fon onye ọrụ afọ ofufo gbaa mmadụ votu? -Eme na-agbanwe agbanwe a website button site acha anụnụ anụnụ na-acha akwụkwọ ndụ na-abawanye click-site ọnụego? O di nwute na, omume rụrụ phrasing banyere ihe "na-arụ ọrụ" obscures eziokwu na ndiduọ lekwasịrị anya nwere na-adịghị n'ezie agwa gị ma ị a ọgwụgwọ "na-arụ ọrụ" na n'ozuzu ya. Kama nke ahụ, ekekpere ndiduọ lekwasịrị anya nwere aza a ọtụtụ ihe ndị ọzọ kpọmkwem ajụjụ: ihe nke na-nkezi mmetụta nke a kpọmkwem ọgwụgwọ na a kpọmkwem, mmejuputa iwu maka nke a bi na nke sonyere na n'oge a? Aga m akpọ nwere na-elekwasị anya na nke a warara ajụjụ dị mfe nwere.
Mfe nwere ike inye ihe ọmụma bara uru, ma ha adịghị aza ọtụtụ ajụjụ nke na-ma mkpa na-akpali ndị dị ka: è nwere ụfọdụ ndị n'ihi na onye ọgwụgwọ nwere a ibu ma ọ bụ obere mmetụta ?; bụ n'ebe ọzọ ọgwụgwọ nke ahụ ga-irè karị ?; oleekwa otú nke a nnwale gbasa nabatara umu-elekọta mmadụ chepụtara?
Iji gosi uru nke na-akpụ akpụ n'ofè mfe nwere, ka na-atụle otu n'ime ọkacha mmasị m analọg ubi nwere, a ọmụmụ site P. Wesley Schultz na ndị ọrụ ibe on mmekọrịta dị n'etiti mmadụ norms na oriri ike (Schultz et al. 2007) . Schultz na ndị ọrụ ibe eyịride doorhangers on 300 ezinụlọ na San Marcos, California, na ndị a doorhangers naputa dị iche iche ozi e mere iji gbaa ya ume ike nche-kwa. Mgbe ahụ, Schultz na ndị ọrụ ibe tụọ mmetụta nke ndị a ozi na ọkụ eletrik na oriri, ma mgbe otu izu na izu atọ; -ahụ ọgụgụ 4.3 n'ihi na a ọzọ zuru ezu nkọwa nke ibuo imewe.
Ọgụgụ 4.3: schematic nke imewe site Schultz et al. (2007) . Ubi nnwale gụnyere ileta banyere 300 ezinụlọ na San Marcos, California ugboro ise n'elu asatọ izu oge. Na nke ọ bụla ịga na-eme nnyocha iji aka were a ọgụgụ site n'ulo ike mita. On abụọ nke nleta na-eme nnyocha enịm doorhangers on ulo-enye ụfọdụ banyere ha ume ojiji. The nnyocha ajụjụ bụ otú ọdịnaya nke ozi ndị a ga-emetụtarịrị ume ojiji.
The nnwale abụọ ọnọdụ. Ke akpa idaha, ezinụlọ natara n'ozuzu ike ịzọpụta Atụmatụ (eg, ojiji Fans kama ikuku conditioners) na ihe ọmụma banyere ihe ezinụlọ ha na si ume ojiji tụnyere ndị nkezi nke ume ojiji n'agbata obi ha. Schultz na ibe-akpọ nke a na akọwa normative ọnọdụ n'ihi na ihe ọmụma banyere ike iji obi ha nyere ọmụma banyere ahụkarị omume (ie, na-akọwa mmadụ norm). Mgbe Schultz na ibe-ele anya na dapụtara ume ojiji nọ n'otu a, ọgwụgwọ pụta ìhè n'ihu enweghị mmetụta, ma na-adịghị adịte aka ma ọ bụ na-okwu; ndị ọzọ okwu, ọgwụgwọ yiri ka ha adịghị "ọrụ" (ọgụgụ 4.4).
Ma, dabara nke ọma, Schultz et al. (2007) na-enwekwa ọnọdụ maka a dị mfe ga analysis. Tupu nnwale malitere na ha chere na arọ ọrụ nke ọkụ eletrik-ndị n'elu pụtara-ike belata ha oriri, na ahuwo kwa ìhè na-ọrụ nke ọkụ eletrik-ndị n'okpuru pụtara ahụ-ọ pụrụ n'ezie ịmụba ha oriri. Mgbe ha lere data, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ha hụrụ (ọgụgụ 4.4). N'ihi ya, ihe yiri a ọgwụgwọ nke e-enweghị mmetụta bụ n'ezie a ọgwụgwọ na abụọ offsetting mmetụta. The nnyocha na-akpọ nke a counter-arụpụta mmụba e nwere n'etiti ìhè ọrụ a boomerang mmetụta.
Ọgụgụ 4.4: Results si Schultz et al. (2007) . The mbụ panel na-egosi na nkọwa a na-norm ọgwụgwọ nwere ihe e mere atụmatụ efu nkezi ọgwụgwọ mmetụta. Otú ọ dị, nke abụọ panel na-egosi na nke a nkezi ọgwụgwọ mmetụta n'ezie esịnede abụọ offsetting mmetụta. N'ihi na arọ ọrụ, ọgwụgwọ ebelata ojiji ma n'ihi na ìhè ọrụ, ọgwụgwọ ụba ojiji. N'ikpeazụ, nke atọ panel na-egosi na nke abụọ ọgwụgwọ, nke eji akọwa na injunctive norms, nwere Olee ihe enyemaka otu mmetụta na ọ dị arọ ọrụ ma mitigated ndị boomerang utịp ke ìhè ọrụ.
Ọzọkwa, Schultz na ndị ọrụ ibe atụ anya nke a ga-ekwe omume, na nke abụọ ọnọdụ ha gbapụ a ubé dị iche iche ọgwụgwọ, onye n'ụzọ doro anya na e mere iji kpochapụ boomerang mmetụta. The ezinụlọ nke abụọ ọnọdụ natara kpọmkwem otu ihe ahụ ọgwụgwọ-n'ozuzu ike ịzọpụta Atụmatụ na ozi banyere ihe ezinụlọ ha na si ume ojiji tụnyere ndị ha obi-ya na otu obere adianade: n'ihi na ndị mmadụ na n'okpuru-nkezi oriri, ndị na-eme nnyocha kwukwara a :) na n'ihi ndị mmadụ na n'elu-nkezi oriri ha kwukwara a :(. ndị a emoticons e mere na-akpali ihe na-eme nnyocha na-akpọ injunctive norms. Injunctive norms na-ezo aka ka nghọta, nke ọtụtụ ndị mma (na a jụrụ ajụ) ebe akọwa norms na-ezo aka ka nghọta, nke ọtụtụ ndị mere (Reno, Cialdini, and Kallgren 1993) .
Site na-agbakwụnye a otu obere emoticon, ndị na-eme nnyocha n'ụzọ dị ịrịba ama belata ihe boomerang mmetụta (ọgụgụ 4.4). N'ihi ya, site na-eme nke a dị mfe mgbanwe-a mgbanwe na e akwali onye nkịtị na-elekọta mmadụ psychological tiori (Cialdini, Kallgren, and Reno 1991) bụ, nnyocha nwee ike atụgharị a ndutịm nke na-agaghị iyi na-arụ ọrụ n'ime otu na -arụ ọrụ, na, n'otu oge, ha na-enwe ike eme ka n'ozuzu nghọta nke otú elekọta mmadụ norms emetụta akparamàgwà mmadụ.
N'oge a, Otú ọ dị, ị pụrụ ịhụ na ihe na-a bit dị iche iche banyere ihe a. Karịsịa, nnwale nke Schultz na ibe anaghị n'ezie nwere akara otu ke otu ụzọ na enweghị usoro-achịkwa nwere ime. The tụnyere n'etiti a haziri na imewe nke Restivo na van de Rijt-egosi ọdịiche dị n'etiti ndị abụọ isi aghụghọ na-eji eme nnyocha. Na n'etiti-achị aghụghọ, dị ka Restivo na van de Rijt, e nwere ọgwụgwọ ìgwè na a akara otu, na na n'ime-achị aghụghọ na omume nke na sonyere tụnyere tupu mgbe ọgwụgwọ (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) . Na a n'ime-isiokwu nnwale ọ bụ dị ka ma ọ bụrụ na onye ọ bụla soÚ na-eme dị ka ya akara otu. The ike nke dị n'etiti-isiokwu nd aghụghọ bụ na ọ na-enye nchedo confounders (dị ka m kwuru na mbụ), na ike nke n'ime-achị nwere na-ebukwu ibu nkenke na atụmatụ. Mgbe ọ bụla na-eme dị ka ha onwe ha akara, n'etiti-soò na mgbanwe na-tutu amama (lee na ụzụ Odide Ntụkwasị). Iji na-ese onyinyo ihe na-abịa mgbe e mesịrị, mgbe m na-enye ndụmọdụ banyere emebe digital nwere, e nwere ikpeazụ imewe, a na-akpọ a gwara agwa imewe, na-agwakọta mma nkenke nke n'ime-achị aghụghọ na nchedo etinye of n'etiti-achị aghụghọ.
Ọgụgụ 4.5: Three ibuo aghụghọ. Standard enweghị usoro na-achịkwa nwere ike iji n'etiti-isiokwu nd aghụghọ. Otu ihe atụ nke a n'etiti-achị imewe bụ Restivo na van de Rijt si (2012) nnwale on barnstars na onyinye ka Wikipedia:-eme nnyocha na-enweghị usoro kewara sonyere n'ime ọgwụgwọ na akara dị iche iche, nyere ndị na-ọgwụgwọ otu a barnstar, na tụnyere a ga esi maka ihe abụọ iche iche. A abụọ ụdị imewe bụ a n'ime-achị imewe. The abụọ nwere na Schultz na onye otu na- (2007) ọmụmụ na-elekọta mmadụ norms na ume eji mee ihe atụ a n'ime-achị imewe:-eme nnyocha tụnyere ọkụ eletrik ojiji nke sonyere n'ihu na mgbe na-anata ọgwụgwọ. N'ime-achị aghụghọ na-enye mma mgbakọ na mwepụ nkenke site na iwepu n'etiti isiokwu ndịiche (lee na ụzụ Odide Ntụkwasị), ma ha na-emeghe ka o kwere omume confounders (eg, mgbanwe ihu igwe n'etiti tupu ọgwụgwọ na ọgwụgwọ oge) (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) . N'ime-achị aghụghọ na-akpọ mgbe ụfọdụ ugboro ugboro jikoro aghụghọ. N'ikpeazụ, weere aghụghọ ikpokọta mma nkenke nke n'ime-isiokwu nd aghụghọ na nchedo etinye of n'etiti-achị aghụghọ. Na a gwara agwa imewe, a na-eme nchọpụta na-eji tụnyere mgbanwe na a ga esi maka ndị na ọgwụgwọ na akara dị iche iche. Mgbe na-eme nnyocha na-ama nwere tupu ọgwụgwọ ọmụma, dị ka ọ na ọtụtụ digital nwere, weere aghụghọ bụ mma n'etiti-achị aghụghọ n'ihi uru na nkenke (lee na ụzụ Odide Ntụkwasị).
N'ozuzu, imewe na ihe Schultz et al. (2007) -egosi uru nke na-akpụ akpụ n'ofè mfe nwere. Ọ dabara nke ọma, ị na-adịghị mkpa ka onye mmụta pụrụ iche ike nwere dị ka nke a. Social ọkà mmụta sayensị mepụtara atọ banye n'eluigwe nke ga-eduzi gị n'ebe baa ọgaranya na ndị ọzọ ihe nwere: 1) ndaba, 2) heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta, na 3) usoro. Ya bụ, ọ bụrụ na ị na-atọ ndị a echiche n'uche mgbe ị na-emebe gị nnwale, i ga-ndammana ike ọzọ na-akpali ma na ọ bara uru nwere. Iji maa atụ atọ ndị a echiche ndị dị edinam, Aga m na-akọwa a ọnụ ọgụgụ nke ndị na-elu-ezughị ezu dijitalụ ubi nwere na wuru na mara imewe na-akpali akpali utịp ke Schultz et al. (2007) . Ka ị ga-ahụ, site n'aka ihe akpachara anya imewe, mmejuputa iwu, analysis, na akukọ-isi, gị onwe gị pụrụ ịkpali n'ofè mfe nwere.